Fampiasana fanandramana mandeha ho azy hanatsarana ny traikefa amin'ny Salesforce | Martech Zone
Talata, Aogositra 4, 2020 Talata, Aogositra 4, 2020 Mahendra Alladi
Ny fijanonana mialoha ny fanovana haingana sy ny famerenana amin'ny sehatra lehibe, toa ny Salesforce, dia mety ho fanamby. Fa Salesforce ary AccelQ dia miara-miasa amin'ny fanatanterahana izany fanamby izany.
Ny fampiasana ny sehatry ny fitantanana kalitaon'ny AccelQ, izay mifamatotra mafy amin'ny Salesforce, dia manatsara sy manatsara ny kalitaon'ny famoahana Salesforce an'ny fikambanana. AccelQ dia sehatra iarahan'ny orinasa ampiasaina hampiasana automatique, hitantana, hanatanteraka ary hanarahana ny fitsapana Salesforce.
AccelQ no hany fanandramana automatique fitantanana sy fitantanana mitohy voatanisa ao amin'ny Salesforce AppExchange. Raha ny marina dia maro amin'ireo mpanjifa orinasa Salesforce no nanaiky ny AccelQ, nomena ny sanda nentina hanatsarana ny tsimbadika Salesforce. AccelQ dia nandalo dingana fanombanana henjana mba hahazoana lisitra ao amin'ny Salesforce AppExchange. Raha ny marina, maro amin'ireo mpanjifa orinasa Salesforce no nanaiky ny AccelQ, nomena ny sanda nentina hanatsarana ny tsimbadika Salesforce.
Sehatra fitantanana fitsapana tanteraka
AccelQ dia sehatr'asa fitantanana fitsapana tanteraka manampy ny orinasa hametraka fampiharana Salesforce tsara. Tafiditra amin'ny rahona, AccelQ dia haingana kokoa ary mora kokoa ny mametraka azy noho ny Provar na Selenium.
Fitaovana amin'izao fotoana izao izay manandrana mandeha ho azy ny fitsapana Salesforce dia tsy mahomby satria tsy afaka mitondra fomba fijery ara-barotra. Ary tsy tantin'izy ireo mihitsy ny fifandraisan'ny mpampiasa Salesforce sy ireo singa ao aminy. AccelQ dia tena manamora, manamboatra ary manafaingana ny automatisation test an'ny Salesforce miaraka amin'ny Salesforce Universe efa namboarina, ny vahaolana manokana an'ny AccelQ ho fanohanana ny ekosisteman'ny Salesforce.
Salesforce dia mety ho sarotra be amin'ny atiny tranokala mavitrika, iframes, ary Visualforce, raha tsy hitonona afa-tsy vitsivitsy izy, miaraka amin'ny filana manohana ny Salesforce's Lightning and Classic editions. Ny AccelQ dia mitantana an-tsakany sy an-davany ireo fahasarotana rehetra ireo amin'ny automatisation no code tsy misy code izay misy amin'ny rahona. Ny tsingerim-panatanterahana sy ny famotsorana dia nanafaingana tokoa ny mpanjifan'ny Salesforce an'ny AccelQ sady manome kalitao avo kokoa amin'ny orinasa amin'ny vidiny ambany kokoa.
Ny efitrano fitsapana Salesforce an'ny AccelQ dia mitantana ny drafitra fitsapana fitsapam-pahaizana mifototra amin'ny modely na fanovana, famonoana ary fanarahana ny drafitra efa voarindra. Io dia ahafahan'ny orinasa manara-maso ireo tranga fitsapana novonoina tamin'ny fomba fiasa amin'ny raharaham-barotra ary mamela ny tsingerina fanamarinana haingana miaraka amin'ny fanovana fanovana eo amin'ny fampiharana Salesforce.
Salesforce Content Pack dia manafaingana ny automatisation test an'ny Salesforce miaraka amin'ny Salesforce Universe izay efa voafaritra mialoha, ny automatisation amin'ny teny voajanahary tsy misy code, ary ny fahafaha-mamakafaka ny fiantraikany amin'ny fiovana. Ny orinasa dia afaka mahatratra 3x hafainganam-pandeha amin'ny fizarana kalitaon'ny fampiharana Salesforce.
Fitsapana mandeha ho azy sy fitantanana
AccelQ dia manolotra automatique fitsapana izay haingana sy mora, toy ny Salesforce. Manome:
Modely hita maso amin'ny fampiharana ny Salesforce sy ny fizotran'ny orinasa
Tsotra ary mandeha ho azy ny automatisation tsy misy kaody
Ny drafitra fanandramana manan-tsaina sy ny fanatanterahana famonoana rahona dia ampidirina miaraka amin'ny fitohizana mitohy
Ny fitantanana fitsapana feno miaraka amin'ny fitadiavana anaty ho an'ny fananana fanandramana rehetra
Dashboard mailaka ho an'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny tatitra amin'ny antsipiriany
Ary koa, ny AccelQ dia mameno ny Selenium ho an'ireo orinasa te-hanao automatique ny andrana fangatahana Salesforce miaraka amin'i Selenium, indrindra raha ny fitsapana an-tanana fotsiny dia tsy afaka manarona ireo fepetra takiana amin'ny fitsapana ny famerenana.
Ny fampiharana natsangana tamin'ny Salesforce dia sarotra be ary mety ho sarotra ny hosedraina amin'ny Selenium. Ny AccelQ dia mamela ireo mpitsapa hiteraka tranga fitsapana ho an'ny Salesforce amin'ny alàlan'ny fanamorana sy manatsara ny herin'i Selenium, mahatonga azy io ho azo itokisana, azo ovaina ary mahomby.
Fandinihana tranga momba ny fitsapana ny varotra AccelQ
Mpanjifa Salesforce iray nahafahan'ireo mpampiasa ny varotra Salesforce manana fahafaha-manao fanandramana mandeha ho azy avy amin'ny AccelQ
Ny mpanjifa, orinasa manerantany, angona ary fandrefesana manerantany any UK, dia te hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ary koa ny kalitao sy ny hakingan'ny rafitry ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa Salesforce. Ity fampiharana Salesforce ity dia zava-dehibe amin'ny orinasa, saingy amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fitsapana ny famerenam-bidy dia handany loharanon-karena be dia be.
Ka ny mpanjifa dia te:
Ataovy automatique ny fanamarinana ny fizotry ny asa amin'ny maodelim-barotra enina samihafa
Tantano ny fahasarotan'ireo fanaraha-maso Salesforce Lightning ho an'ny fifandraisana mandeha ho azy
Ahenao ny fanandramana amin'ny tanana manomboka amin'ny andro maromaro ka hatramin'ny ora vitsivitsy
Miaraha miasa amin'ny fomba mahomby amin'ireo zana-kazo namboarina sy nisesy ao amin'ny Salesforce ary ialao ny fikolokoloana
Alefaso ny ekipa mpandraharaha hanao automatique in-sprint
Ny tombotsoan'ny orinasa AccelQ dia misy:
Haingana kokoa, avoakan'ny Salesforce avo lenta
Ny ezaka fanandramana natao isan-andro dia nidina ho famerenana miverina mandeha ho azy
Fampihenana miavaka amin'ny vidiny sy ezaka
Modularité ahafahana mampivoatra ny automatisie dingan'asa vaovao miaraka amina 80% ampiasaina indray
Ekipa fanandramana ahafahana mamolavola sy mampivelatra ny automatisation miaraka amina fampiharana vaovao
Fahombiazana ara-teknika miaraka amin'ny tombony maharitra
Fomba fanao tsara indrindra sy fitsipika momba ny famolavolana hiatrehana hatrany ny ahiahy amin'ny peripheral sy ny fanarahan-dia
Ny fanandramana Salesforce sy ny automatisation dia mitaky hakingan-tsaina bebe kokoa noho ny fanamafisana sy ny fampiharana. Ny fahaizan'i AccelQ dia miavaka amin'ny fananana fanandramana fanandramana vonona hampiasaina tsy misy fahasarotana ara-teknika sy fihoaram-pefy. Miaraka amin'ny AccelQ, ny orinasa dia afaka manome hery ireo mpampiasa azy sy ireo mpiara-miasa aminy hafa ary mahazo fahitana feno amin'ny kalitaon'ny fampiharana Salesforce.
Fitsapana maimaimpoana ny AccelQ ho an'ny Salesforce
Tags: appexchangefanamafisana ny fizotran'ny asa aman-draharaha mandeha ho azyfanandramana miverina mandeha ho azymandeha ho azy ny raharaham-barotrasalesforcempivarotra appexchangefonosan'ny atiny mpivarotravaratra varotrafanandramana ny varotraséléniumfanandramana mandeha ho azyfitantanana fitsapanafanandramana mandeha ho azyvisualforce
Mahendra dia ny mpanorina sy ny CEO an'ny accelQ, sehatra fanandramana mitohy miorina amin'ny rahona izay manodina ny API sy ny fitiliana tranonkala tsy misy fanoratana kaody tokana.
Ny fiantraikan'ny hafainganan'ny tranonkala amin'ny tahan'ny fiovam-po amin'ny ecommerce